« Tsarazaza-Fandriana sy ny Sinoa . Rivo Albert Mcm Tanà, G.TiaTanindrazana. | «Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← « Ny Fitiavana no lehibe indrindra ! », ny kobay an-kelika ihany. M. Ravalomanana.
« Ny mpihatsara velatsy », Nitiah Nosy. →
« Tsarazaza-Fandriana sy ny Sinoa ». Rivo Albert Mcm Tanà, G.TiaTanindrazana.
Vita ny tao Soamahamanina, manomboka ny ao Tsarazaza
Ny zoma teo no nifamory tao Fianarantsoa ny solotenan’ireo Betsileo avy any Fandriana, na ireo antsoina hoe « terak’i Fisakana ». Ny antony fivoriana dia maresaka be amin’izao fotoana izao ary efa voaporofo fa hitrandraka harena ankibon’ny tany ao amin’ny kaominina Tsarazaza, ao amin’ny distrikan’i Fandriana ny Sinoa. Toherin’ny « Terak’i Fisakana » moa izao tetikasa fitrandrahana ho ataon’ny Sinoa izao satria tsy misy na ny kely aza avy amin’ny fanjakana ny fifampiresahana amin’ny fokonolona sy ireo zanaky ny distrikan’i Fandriana fa avy hatrany dia tonga fotsiny ny Sinoa ka taitra ny fokonolona.
Tsy hoe manohitra be fahatany ny fitrandrahana akory ireto zanak’i Fandriana ireto fa takian’izy ireo ny tokony hisian’ny fifampiresahana sy ny mangarahara. Raha toa moa ka miziriziry indray ny fanjakana dia tsy maintsy hihetsika ny mponina ao Tsarazaza ka hitovy tahaka izay niseho tao Soamahamanina ny tantara. Ny tranga tahaka izao dia tena manaporofo fa tsy mahay mitantana firenena araka ny tokony izy mihitsy ireto mpitondra HVM ireto, tsy misy mihitsy ilay hoe « Bonne gouvernance » fa kitoatoa daholo ny zavatra atao rehetra. Dradradradraina foana ny hoe « decentralisation effectif »,… kanefa tsy asiana hasiny mihitsy ny fokonolona eny ifotony fa avela manao ny ataony ny Sinoa sy ny vahiny.
Ary ny tena olana dia mahita fomba hiarovana ireo Sinoa foana ny fanjakana rehefa raikitra ny disadisa. Tsy mahagaga izany satria misy ireo mahazo volabe ka tsy te ho very tombotsoa.
Mitsirika kraoma sy volamena Maka tany any Fandriana indray ny Sinoa
Miakatra ny feom-bahoaka any amin’ny Kaominina Tsarazaza, Distrikan’i Fandriana taorian’ny namariparitan’ny orinasa sinoa Madagascar Mining Resources Limited SARL ny tany amin’ny Fokontany valo ao an-toerana.
Tamin’ny 3 septambra 2016 no nanaovana izany, ka nitondran’ilay orinasa zandary enin-dahy sy polisy efatra mitam-basy, izay nanaitra ny mponina ny fahitana azy ireo. Hatramin’ny zanaka ampielezan’i Fandriana, mila ravinahitra ao Fianarantsoa no taitra manoloana ity raharaha ity, ka nifamory omaly tao Besorohitra hamaritra paikady fanoherana an’io. Fitsirihana kraoma sy volamena no nangatahan’ilay orinasa, ka nahazoany alalana avy amin’ny ministeran’ny harena ankibon’ny tany tamin’ny volana aogositra 2016, ary nosoniavin’ny Ben’ny tanànani Tsarazaza, ny lehiben’ny Distrika Fandriana ary ny Prefen’Ambositra.
Mandà marindrano ny hidiran’ny Sinoa hitrandraka harena ankibon’ny tany any aminy anefa ny ankamaroan’ny vahoaka any Tsarazaza, noho ny ambaran’izy ireo fa be tany fady ny Fokontany efatra amin’ireo valo efa nofariparitan’ny Sinoa ireo. Tanimbary 40ha ihany koa izao no efa tototry ny atsanga, ka manahy ny hitaran’izany ireo tantsaha vokatry ny fitrandrahana hataon’io orinasa io ; ary amin’izy ireo raha hisy fitrandrahana ihany hatao ao Tsarazaza dia tsy vahiny no homena hanao izany fa ny Malagasy. Nidina nijery ny zava-nisy tany Tsarazaza ny lehiben’ny Faritra Amoron’i Mania sy ny Tale iraisam-paritry ny harena an-kibon’ny tany Fianarantsoa ny alakamisy 6 oktobra 2016 teo.
Nanamarika ny Tale iraisam-paritry ny harena an-kibon’ny tany fa tsy naharay taratasy fangatahana avy amin’io orinasa io. 12 ihany hoy izy ny fahazoan-dalana ara-dalàna hitsirika harena an-kibon’ny tany misy ao anatin’ny Faritra Amoron’i Mania, saingy tsy ao anatin’izany ny an’ity orinasa sinoa tonga ao Tsarazaza ity. Ny 10 amin’ireo 12 aza, araka ny fanazavany hatrany dia mety hosintomina ny fahazoan-dalana eny ampelan-tanany noho ny tsy fanarahana ny bokin’andraikitra. Loharanom-baovao hafa no mitatitra fa hiitatra amin’ny Kaominina telo hafa ao anatin’ny Faritra Amoron’i Mania ny asa fitsirihana hataon’ireto Sinoa ireto, dia ao Tatamalaza sy Miarinavaratra ho an’ny Distrikan’i Fandriana ary Ambatomarina ho an’ny Distrika Manandriana.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Les chinois à Fandriana, Miarinavaratra-Fandriana, Soamahamanina, Tatamalaza Amoron'iMania, Tsarazaza-Fandriana. Ajoutez ce permalien à vos favoris.